Kugadziriswa & Kutumira
Mafekitori Ekushanya & Ratidza
Nei VANOSHESA danymia JEWELRY
na admin on 20-06-08
Yiwu danymia Jewelle Factory, inoshandira kugadzira, kugadzira uye kugadzira marudzi ese emafashoni mitsipa, mhete, zvishongo, mhete uye zvimwe zvishongo seti. Isu tiri vamwe vevakuru vezvigadzirwa zvekushongedza izvo zvinotengesa zvakananga kune vatengesi vezvitoro uye vatengesi kutenderera nyika, uye tarisa kutenda ...
1. Musoro: Mumusoro unoreva kushongedza kunoshandiswa kwakakomberedza bvudzi nenzeve, mhino uye zvimwe zvikamu. Yakatsanangurwa inogona kukamuraniswa:
IZVI ZVINONYANYA ZAZIVI NEZVINHU ZVINOGONA KUTI URI
Zvishongo zvine ruvara, zvinopfekwa pane vanhu vane mavara akasiyana eganda, pachave nekuonekwa kwakasiyana, kwakanaka, chic, kusindimara, kushambadza, ndiwo mhedzisiro yemavara anoenderana nerudzi rwezvishongo. Kune avo vane ganda rakasviba rwemavara, iwe unogona kusarudza zvishongo zvinoyevedza, senge zerahwe rine mavara, ...
Kutarisira Yako Yakarongedzwa jewelry
1.Keep zvishongo kubva kure nenzvimbo dzakaoma, mabhomba uye zvikwangwani zvichaita kuti iyo yakarongwa plates kupera nekukurumidza. 2.Pukuta kupukuta zvishongo zvako nejasi remarara machira. Izvo zvinogona kubatsira kubvisa tsvina pamusoro uye kupfekedza kurembera rakarukwa. 3.Gold geza zvishongo neasina-abrasive jewelry jewelry ...
kero NO.90, Chunhan South Road, Beiyuan Street, Yiwu, China